पोखरा शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटनको राजधानी : मुख्यमन्त्री पोखरेल - Safalnews- News Portal from Nepal in Nepali.
सफल न्युज द्वारा २०७८ आश्विन २१ गते बिहीबार १७:४७ मा प्रकाशित
पोखरा, असोज २१ ग्ते । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले पोखरालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटनको राजधानी बनाउनुपर्ने बताएका छन् । पोखराको काहुँमा निर्मित चरक इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्स प्रालिको भवन बिहीबार उद्घाटनपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले यसका लागि प्रदेश सरकारले लगानीको वातावरण बनाइरहेको बताए ।
कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री बिन्दुकुमार थापाले पोखराको सुन्दरताको अधिकतम प्रयोगका लागि जुनसुकै तरिका अपनाएर भए पनि पर्यटक भिœयाउनुपर्ने भनाइ राखे । प्रदेश सभा सदस्य राजीव पहारीले निजी तबरबाट सञ्चालित शैक्षिक र स्वास्थ्य संस्थाहरुको योगदानको मूल्यांकन राज्यस्तरबाट हुन नसकेको बताए । कार्यक्रममा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुको संगठन (अफिन) गण्डकी संयोजक अशोक पालिखेले सरकारले निजी नर्सिङ कलेजलाई मर्का पर्ने गरी गतिविधि गर्दै आएको भनाइ राखे । पोखरामा ५ र प्रदेशभर १४ नर्सिङ कलेज रहेको भन्दै उनले सिटिइभिटी र सरकारको प्रष्ट धारणा नआउँदा सञ्चालक र विद्यार्थी मर्कामा परेको बताए ।
चरक इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्स प्रालिका अध्यक्ष कपिल पोखरेलले पोखरामा शिक्षा र स्वास्थ्यको सम्भावना देखेर नै दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि कलेज सञ्चालनमा ल्याइएको बताए । कार्यक्रममा कलेजका सञ्चालन सञ्चालक टंक अधिकारी, सिटिइभिटी गण्डकी प्रमुख प्रमोद आचार्य, प्रदेश शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव विनोदबहादुर कुँवर, पोखरा विश्वविद्यालय स्वास्थ्य संकायका डिन डा. अमर नागिला लगायतले भनाइ राखेका थिए । १६ वर्ष अघि पोखराको काहुँमा खुलेको नर्सिङ कलेज हाल चरक गु्रपले लिएर नयाँ व्यवस्थापनका साथ सञ्चालन हुँदै आएको छ ।